Maalinta: Abriil 22, 2020
Bayaanka lagu soo daabacay mareegtada rasmiga ah ee BURULA stated, waxaa lagu sheegay inay jiraan isbadal ku yimid adeegyada basaska sababtuna tahay bandoowga la adeegsan doono 23-24-25-26 Abriil. Jidadka Xaddidan Ee Basaska Loogu Dalbanayo In Lagu Joogo Wadooyinka Bandowga HAT GÜZERGAH 30 [More ...]
Qaybta Ugu Muhiimsan ee Kanuni Boulevard Ayaa Loo Furey Gaadiidka Wadada Tareenka!
2,4 km oo ah Kanuni Boulevard, oo dhismihiisu socdo, si loo yareeyo tirada kordhaysa ee taraafikada ee Trabzon, oo boos muhiim ah ka haysata waddada ganacsiga ee isku xidha Yurub iyo Aasiya, ayaa la hawl galiyay. Çatak-1, Çatak-2, Uğurlu, [More ...]
Marka la eego baaxadda tallaabooyinka laga qaadayo cudurka 'coronavirus' (Covid-19), bandoowga waxaa la adeegsan doonaa 23-26 Abriil 2020, sida ku xusan go'aanka ANKARA GOVERNOR'S UMUMI HIFZISSIHHA BOARD taariikhdu markay ahayd 21.04.2020 iyo lambar 2020/25 Khamiista. [More ...]
Wasiirka Gaadiidka iyo Kaabayaasha dhaqaalaha Adil Karaismailoğlu wuxuu la kulmay maamulka maareeyayaasha GSM iyo muuqaalka muuqaalka. Karaismailoğlu wuxuu khudbadiisa ku xusay in isbadallo muhiim ah ay ku yimaadeen nolosha bulshada sababtuna tahay cudurka loo yaqaan 'New Type Coronavirus' (Covid-19). [More ...]
Shaqaalaha waxaa shaqaaleyn doona Wasaaradda Arimaha Gudaha si loogu shaqeeyo xafiiska dhexe. Codsiyada ku dhawaaqista shaqaalaha, oo qaadan doona 13 shaqaale oo ku qoran magacyo kala duwan, ayaa maanta bilaabmay. Qodobka 657-aad ee Sharciga Shaqaalaha Dawladda ee Lr. 4 (B) [More ...]
Corona (COVID-19) Fayras Faafa, oo saameyn ku leh adduunka oo dhan, wuxuu sidoo kale si qoto dheer u saameeyay soo-saarka F-35 Hillaac II, mid ka mid ah mashaariicda ugu weyn ee difaaca adduunka. Waaxda Gaashaandhigga Mareykanka ee hubka halista ugu badan iyo [More ...]
Lacagta Billaha ah ee Loogu Tala galey Barnaamijka Caawinta Qoyska Askariga Baahan
Marka la eego baaxadda Barnaamijka Caawinta ee Ciidanka Qalabka Sida ee Wasiirka Qoyska, Shaqada iyo Adeegyada Bulshada, Zehra Zümrüt Selçuk, Madaxweyne Recep Tayyip Erdoğan, lacagta billaha ah waxay kordhay 45,45% laga bilaabo 275 TL ilaa 400 TL, [More ...]
Dawlada Hoose ee Elazig ayaa dib u habeysay waqtiyadii baska; Degmada Elazig waxay sameysay qorshe cusub waqtiyada gaadiidka dadweynaha inta ay la egtahay cabirka cudurada faafa ee Corona. Laga bilaabo 24 Abriil 2020 iyada oo loo eegayo xaddiga diyaarinta [More ...]
İmamoğlu: 'Ramadaanku Waa Bisha Sadaqada, Ha odhanina Cidna tidhaahda'
Madaxweynaha remBB Ekrem İmamoğlu wuxuu u dabaaldegay 23-guuradii qaranimada iyo maalinta carruurta. [More ...]
Isbitaalka Magaalada Bursa ee Magaalada Matoono Mitir Kusoo Jeedin doona Kahor Bisha June
Alinur Aktaş, Duqa Magaalada Bursa Metropolitan Municipal, oo kaqeybgaley kulanka Gudiga Agaasimayaasha ee TÜMSİAD Bursa Laanta oo leh qaab wadareed fiidiyow ah una sameeysay bayaano muhiim ah oo kusaabsan maalgashiga gaadiidka, ayaa bixiyay labo war wanaagsan. Gaadiidka maalmihii lasoo dhaafay [More ...]
Dowladda Hoose ee Magaalada Kayseri waxay sameysay qorsheynta lagama maarmaanka u ah gaadiidka iyo baahida rooka ee muwaadiniinta mudada afarta maalmood ee bandooga. Gawaarida dadweynaha ee gaadiidka loogu talagalay dadka ka shaqeyn doona inta bandowga la soo bandhigayo [More ...]
Miyey Başkentray Ka Shaqaysaa Bandowga 4-Maalmood?
Dowladda Federaalka ah ee Ankara, jidadka caasimadda inuu ka baxo xayiraad la isticmaali doonaa maalmaha dhaqanka ego basaska loogu talagalay dadka ka reeban yihiin Jamhuuriyadda Turkey Tareennada State (TCDD) ayaa sheegay ku xirnaan doonto adeegga BAŞKENTRAY saacadaha kooban. Waxaa laga sameeyay Maamulka [More ...]
InnoTrans Railway Fair ayaa dib loo dhigay
Bandhiga tikniyoolajiyadda tareenka ee Innotrans, oo loo qorsheeyay in lagu qabto Berlin bisha Sebtember, dib ayaa loo dhigi doonaa. Golaha Senate-ka ee Berlin ayaa mamnuucay dhacdooyinka inka badan 24 oo kaqeybgale ah Talaadada, 5.000 Oktoobar, si looga hortago faafitaanka viruska cusub ee corona. [More ...]
Agagaarka Caruurnimada Caruurta ee Dharka Dharka
Sannad-guuradii 100aad ee ka soo wareegtay markii la aasaasay Golaha Qaranka ee Qaranka Turkiga iyo 23-kii Abril ee Qaranka iyo hadiyadda maalinta carruurta, İBB Şehir Hatları AŞ wuxuu sameeyey garoon lagu ciyaaro markii ugu horreysay ee doonta. Carruurta ka socota Istanbul, maalmaha coronavirus [More ...]
Tayada Hawada ee Istanbul ayaa kor u kacday 28,6% bishii Abriil
Xafiiska Tirakoobka Dawladda Hoose ee Magaalada Istanbul wuxuu daabacay Qoraalka Buug-yaraha Deegaanka Istanbul ee Abriil 2020. Qoraalka waxaa ku jiray tirakoobyo ku saabsan tayada hawada magaalada Istanbul, biyaha, maareynta deegaanka, nadaafadda, abuurista korantada ee gaaska dhulka lagu shubo iyo tirakoobka gaaska dabiiciga. In Istanbul, [More ...]
Dowladda Hoose ee Magaalada Ankara ayaa u diyaarisay barnaamij xaflad gaar ah loogu talagalay carruurta ku nool caasimadda oo ku bixin doona "23-ka Abriil Qaranka iyo Maalinta Caruurta" guryahooda dartiis sannadkan awgeed. Boulevard-ka magaalada iyo [More ...]
Tram ayaa ku dhacay baska IETT ee magaalada Istanbul 2 ka dhaawacmay
Masraxa Magaalada Istanbul Ku Dhinta Baska IETT 2 Dhaawacmay; Gawaarida iyo basaska ayaa ku dhacay magaalada Sultangazi, Istanbul. Wadada laamiga ah ee aadeysa jihada Topkap on ee ku taal Old Edirne Asphalt ee Sultangazi Cebeci Mahallesi, darawalka baska ka dhashay isku dhaca baska IETT [More ...]
Gaziantep Metropolitan Intensified Koontaroolada Corona ee Gaadiidka Dadweynaha
Iyada oo la adeegsanayo la dagaallanka Corona Virus (COVID-19) ee Gaziantep Magaala-weynaha, ee gaadiidka dadweynaha ee magaalada; Baarayaasha u hogaansanaanta qawaaniinta masaafada bulshada, ka hortagida awooda rakaabka ee daadgureynta iyo u safrida bilaa maaskaro ayaa la kordhiyay. adduunka [More ...]
IMM waxay qaadatay tilaabooyin la xiriira gaadiidka dadweynaha ee bandoowga lagu dhaqan galiyay magaalada Istanbul Abril 23-24-25-26. Muddo 4 maalmood ah, basaska, tareennada dhulka hoostiisa mara iyo doomaha ayaa u adeegi doona xirfadlayaasha daryeelka caafimaadka iyo saraakiisha waajibka ah. duulimaadyada, [More ...]
Wadooyinka iyo Safarrada Saacadaha Gawaarida Gawaarida ee Izmir
Dawlada Hoose ee Magaalada Izmir waxay kordhisay dariiqyada basaska ee ay si gaar ah ugu qoondeeyeen shaqaalaha caafimaadka afar ilaa lix meel bandoowga si loo dhaqan geliyo inta u dhexeysa 23-26 Abriil. Wadooyinka basaska ee loo qorsheeyay gaar ahaan shaqaalaha daryeelka caafimaadka ayaa laga kordhiyey afar ilaa lix. this [More ...]
Dowlada Hoose ee Magaalada Izmir waxay diyaarisay qorshe gaadiid oo bandowga lagu dhaqan gelin doono inta u dhexeysa 23-26 Abriil. Basaska ESHOT, Metro iyo İZBAN waxay adeegyo gaadiid dadweyne u fidin doonaan dhammaan kooxaha xirfad u leh inay shaqeeyaan. Ku socota xirfadlayaasha daryeelka caafimaadka [More ...]
Dhageysiga kiiska shilalka tareenka ee degmada Çorlu ee Tekirdağ, halkaas oo 25 muwaaddin ku dhinteen 328 ay ku dhaawacmeen, ayaa dib u dhacay sababo la xiriira kororka 19-ka. Waxay ka socotaa magaalada Uzunköprü ee Edirne Halkalı362 rakaab ah oo u guuraya inay tagaan [More ...]
Inta udhaxeysa Hyperloop iyo Amsterdam Paris waxaa loo yareeyay 90 daqiiqo
Shirkad Dutch ah ayaa sare u qaadday shaqadeeda teknolojiyadda hyperloop, taas oo yareyn doonta duullimaadyada Amsterdam-Paris illaa 90 daqiiqo. Waqtigu waa mid ka mid ah waxyaabaha ugu qiimaha badan maanta. Waqti u keydso, gaar ahaan markii aad ka guureyso meel ilaa meel [More ...]
Wuxuu wareegto u diray Wasaaradda Arimaha Gudaha 81 Maamul Gobaleedyo oo ku saabsan Tallaabooyinka Ramadaanka ee dagaalka lagula jiro Coronavirus. Goobaaban nooca cusub ee Kovid-19 oo ah wareegga wareega, sanadkan, inta lagu jiro bisha Ramadaan, iftar, [More ...]